ကြက်တူရွေးကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးငှက်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အဲဒီအကြောင်း 350 နည်းလမ်းများမှတက်နောက်တဖန် 850 subspecies ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ငှက်မျိုးစုံယခုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လေးစားနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလှအပအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ထားရှိမည်။
နေရာထိုင်ခင်း - စောင့်ရှောက်မှု - အလုပ်အကိုင် - Ernährungvonကြက်တူရွေး
ငှက်တို့သည်သြစတြေးလျ, အမေရိကသို့မဟုတ်နယူးဂီနီမှဇာတိဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျင်းပခြင်းနှင့်ဖွင့်ဖို့ 100 နှစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်. ကြက်တူရွေးသဘောထားကိုပေမယ့်ခွေးကယ့်ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ - ကြောင်, guinea ဝက်သို့မဟုတ်သဘောထားကို?
အမျိုးမျိုးငှက်တစ်လှောင်အိမ်ကယ့်သက်သာချောင်ချိရေးဖြစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီအများဆုံးငှက်အစောင့်အထိန်းလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, စောင့်ရှောက်မှု,42 မီတာထက်အိတ်များသေးငယ်ခြင်းနှင့်မီတာကျယ်ပြန့်နှင့်မြင့်မားသောသေချာပေါက်တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမား Aviary ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရမည်တိရစ္ဆာန်တွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ဖြစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အိပ်တဲ့နေရာအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။
ငှက်ရရှိနိုင်မယ့်အကြီးစားအပူအမိုးအကာအပါအဝင်ကြီးမားတဲ့ပြင်ပ Aviary ဖြစ်ပါသည်တဲ့အခါမှသာအမှန်စင်စစ် artgerecht တစ်ကြက်တူရွေးသဘောထားကိုထို့ကြောင့်နိုင်ပါတယ်။
ဤအသောငှက်များအတွက်ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်မတူဘဲလည်းအခန်းထဲမှာသင့်လျော်သောစိုထိုင်းဆဖို့ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တောင်မှအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, ဒီကအနည်းဆုံး 60 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ရပါမည်။
အဘယ်သူသည်အခန်းထဲရှိများစွာသောအပင်, အရှင်တိုးမြှင့်စိုထိုင်းဆကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ကြက်တူရွေးကိုရေနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစိုထိုင်းဆများလွန်းနိမ့်သည်လျှင်, ကြက်တူရွေးပြင်းထန်အဆုတ်ရောဂါရစေခြင်းငှါထိုသို့နောက်ဆုံးမှာသေဆုံးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ Aviary ၏အတွင်းပိုင်းအလွန်တရာအရေးကြီးလှသည်။ ပလပ်စတစ် - သို့မဟုတ် Beech သစ်သားပုံမှန်အတိုင်းအစားထိုးခံရ, ထိုကဲ့သို့သောသစ်သီးပင်, မိုးမခသို့မဟုတ် linden အဖြစ်သဘာဝအကိုင်းအခက်များကြောင့်သင့်ပါတယ်။ အခေါက်အပျော့နှင့်ဘားမဟုတ်ယူနီဖောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ခြေတစ်ရောင်ရမ်းတားဆီးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Aviary ကြမ်းပြင်အတွက်တောင်မှသဲဖုန်ထူမဖြစ်သင့်အစားနေ့စဉ်ပြောင်းလဲသင့်သော newsprint တစ်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ဖုံးအုပ်အဖြစ်သင့်လျော်Buchenholzhäcksel။
အားလုံးမှာ nibbling စဉ်ဆက်မပြတ်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးနိုင်ပါသည်သောကြက်တူရွေးအတွက်လေးလံသောသတ္တုအဆိပ်သင့်, ရှောင်ရှားရန်, Aviary မျှအမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းသို့မဟုတ်ပန်းချီကားရှိသင့်ပါတယ်။ Aviary သံမဏိအဲဒီမှာကပိုသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
ကြက်တူရွေးများအတွက်စီးပွားဖြစ်စပါးကိုအစားအစာအာဟာရများအတွက်သင့်လျော်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်လည်းဖြည့်စွက်တိုက်ကျွေးဖို့ပေးဆောင်ရပါမည်။ သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနေ့စဉ်ကြက်တူရွေးပေးနိုင်ပါသည်။ အားလုံးနီးပါးအမျိုးပေါင်းသင့်လျော်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်များကြသည်။
သဘာဝအားဖြင့်, ကြက်တူရွေးတကယ်တော့အဘယ်သူမျှမသန့်စင်သောအမျိုးအနွယ်ကိုစားပေမယ့်အသီးအပွဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ စပါး feeds တွေကိုများတွင်မှိုအထူးဖော်စပ်ထားရန် exposure ကိုလည်းအထူးလျှော့ရပါမည်။ ပြန်လာခုနှစ်တွင်တစ်ဆန်ခါနှင့်ရေသင့်လျော်သည်။ အဆိုပါအစာကျွေးခြင်းအနည်းငယ် damp တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိမ်သက်တမ်းတိုးရမည်ဖြစ်သည်။ နေဆဲဓာတ်သတ္တုရေတစ်လုံလောက်သောရေပေးဝေမှုအတွက်ဝယ်ယူရပါမည်။ ရေများလွန်းတာကိုဆိုဒီယမ်ဆံ့နှင့်ခိုင်ခံ့သောကြက်တူရွေး၏ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဟုထိပုတ်ပါ။
Daily သတင်းစာအခမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဟာကြက်တူရွေးနေ့ကိုအစီအစဉ်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုငျဆိုငျသငျ့သညျ။ ပျံသန်းနိုင်သောငှက်တို့သည်လျင်မြန်စွာအနာသို့မဟုတ်အဆုတ်ရောဂါရနာရလိမ့်မယ်။
ကြက်တူရွေးကအရမ်းလူမှုရေးတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြကြောင်းကြက်တူရွေးလိုသောမည်သူမဆို, ဒါပေမယ့်သိကြပါဘူး, ဝယ်ယူနောက်တဖန်ထင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအိမ်ယာအတွက်ကြက်တူရွေးအတင်းငှါ, ကြက်တူရွေးများအတွက်ဆိုးဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ ယင်းကြက်တူရွေးပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါစတင်ခြင်းငြင်းဆန်စာကျွေးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်လုံးဝအထီးကျန်ပြီးသေဆုံးမှတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ကြက်တူရွေးမကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်ထားသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှတူညီ genus ရွေးကောက်တော်မူလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လူအနေဖြင့်အလုပ်ခန့်သည်တစ်ဦးကိုအစားထိုးသူတို့ကိုကိုယ်စားပြုနေရမည်မဟုတ်ဘယ်လောက်ကြက်တူရွေးအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ ကြက်တူရွေးများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ, ဤကိုလည်းအများဆုံးအသိဉာဏ်တိရိစ္ဆာန်များအကြားကြောင့်အများအပြားရှိပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ငှက်များနေသောဤအမျိုးအစားအလွန်ရေပန်းစားထားရှိမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပိုင်ရှင်များတိရိစ္ဆာန်များယဉ်ဖြစ်နိုင်သောနှင့်ချစ်ခင်ဖြစ်ကြောင်းအလိုရှိ၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအလေးအနက်အပြုအမူပြဿနာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ပင် misstrike တတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအဆုံးစွန်သောအဆိုပါအမွေးအတောင် plucks နှင့်စာသား spins တဲ့အခါမှာ Self-ဖြတ်တောက်မှုအတွက်ဥပမာ, ကိုပြသလိမ့်မည်။
တချို့ကလက်မွေးကြက်တူရွေးပင်လူသားမြားသညျဆီသို့ဦးတည်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တဲ့ Amazons အတွက် cockatoos နှင့် macaws သတိထား။
အဘယ်သူသည်ကြက်တူရွေး၏သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်ကြက်တူရွေးကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမရှိပြီးသားအုပ်စုများအတွက်ဘဝသိတယ်, သူတို့၏မိဘများကတက်ဆောင်ခဲ့သောတဦးတည်းကိုဝယ်သင့်ပါတယ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှသူတို့အကြက်တူရွေးသည်းခံခြင်းနှင့်အေးဆေးနှင့်အတူယဉ်ဖြစ်ကြသည်။
သားသမီးတို့အဘို့, တစ်ကြက်တူရွေးကယ့်ကိုသင့်လျော်ဘူး။ ပင် tamest ကြက်တူရွေးသူတို့ရဲ့နှုတ်သီးနှင့်အတူဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျယ်လောင်အော်ဟစ်ကလေးများနှင့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲ hectic ဘဝရေရှည်အတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအလေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်သက်သာချောင်ချိရေးတစ်အကုန်အကျကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကြက်တူရွေးအလွန်ကောင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်အထူးသဖြင့်ကတည်းကကောင်းစွာစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဤငှက်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှင်သန်ဖြစ်နိုင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပိုဆောင်းထောက်ပံ့ရေးထို့ကြောင့်လည်းအာမခံရပါမည်။
Pony စီးနင်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်မြင်းအဖြစ်သင်ယူ | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ